Dardaarankii ugu dambeeyey Osama Bin Ladin u jeediyey xaasaskiisa & Caruurtiisa – SBC
Dardaarankii ugu dambeeyey Osama Bin Ladin u jeediyey xaasaskiisa & Caruurtiisa
Hogaamiyaha shabakada Al-Qaacida Osama Bin Ladin ayaa la xaqiijiyey in bishii December sanadkii 2001-dii uu dardaarankii ugu dambeeyey u jeediyey caruurtiisa & xaasaskiisa sida uu qorey mid ka mid ah wargeyska ka soo baxa wadamada Carabta.
Document ka kooban afar bog oo uu daabacay wargeys ka soo baxa wadanka Kuwait ayaa la xaqiijiyey inay ahaayeen dardaarankii Osama Bin Ladin uu u jeediyey qoyskiisa, isagoo si gaar ah ula hadley caruurtiisa kuna yiri “ Caruurteydiyey, waxaan idinka raaligalinayaa inaan idin siiyey waqtigeyga in yar, maxaa yeelay waxaan ka jawaabayaa dalabka Jihaadka ee nalagu waajibiyey”.
Wargeysku wuxuu qorey in Osama caruurtiisa ku yiri sidoo kale “Aad ayaan uga xumahay inaan idin dayaco” taasi oo aheyd fariintii ugu dambeysay ee uu u jeediyo, isagoo fariintaasi markii uu siiyey caruurtiisa & xaasaskiisa galey dhuumasho isagoo ka baxsaneyey ugaarsiga uu Mareykanku ku dhawaaqay in uu beegsanayo Hogaamiyaha Al-Qaacida Osama Bin Ladin.
Osama waxaa sidoo kale warbixintan lagu sheegay in uu xaasaskiisa ka codsadey in aanay guursan hadii uu geeriyoodo isagoo sheegay in looga baahan yahay inay koriyaan caruurta ay dhalaan, isagoo sheegay in uu doonayo in uu Jihaad galo oo uu shahiido, isla markaana wuxuu sheegay in uu doonayo in uu burburiyo Mareykanka & Isra’il.
Fariinta Bin Laden uu u jeediyey xaasaskiisa wuxuu ku yiori “Ha isku dayina inaad guursataan, u hura waqtigiina iyo nolashiina inaad korisaan caruurtiina, aadna ku jihaysaan jihada saxda ee la idinku waajibiyey”.
maasha allah dardaaran wanaagsan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,allaha naxariis siiyo haddu dhintay osama,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cadawga islaamkana allaha jabiyo
Waa arin macquul ah wayo osama wuxu ahaa nin entellectual ah wana talo la raci karo